Maraykanka oo baaraya weerarkii Shabeellaha hoose. – Hornafrik Media Network
Maraykanka oo baaraya weerarkii Shabeellaha hoose.
By HornAfrik	 On May 12, 2018
Hornafrik-Maryekanka ayaa war ka soo saaray howlgal ay ciidamo mareykan ah iyo kuwo Soomaali ah maalmo kahor ka sameeyeen Gobolka Shabeelaha hoose kaasi oo dadka deegaanka sheegeen in lagu dilay dad rayid ah.
Ciidamada Militariga Maraykanka ayaa sheegaya in ay si dhab ah u qaadanayaan wararka sheegaya in dad rayid ah lagu laayey weerar uu Maraykanku taageerayey oo ka dhacay Soomaaliya kaas oo ka dhan ahaa Alshabaab.
Maraykanka ayaa si dhow ula shaqaynayey ciidamada Militariga Soomaaliya asagoo gacan ka siinaya dagaalka ka dhanka ah kooxaha jihaad doonka ah.
Taliska ciidamada Maraykanka ee Africa ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in ay baaritaan ku samaynayaan xog kasta oo la xiriirta dhacdadaan, oo ay kujiraan dhinacyada ay arrintani khusayso.
WHO oo ka war-bixisay fatahaadda ka dhacday Soomaaliya.
Deg-Deg Madaafiic laga maqlay Muqdisho iyo Al-Shabaab oo sheegay in ay …